Mariazy Anelakelatrano, “Fandresena Kely” Hoan’ny Pelaka Ao Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
Mariazy Anelakelatrano, “Fandresena Kely” Hoan'ny Pelaka Ao Tajikistan
Voadika ny 07 Jona 2014 1:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, русский, မြန်မာ, Deutsch, English
Saina LGBT (Wiki image)
Notontosaina [ru] vao haingana tao Dushanbe ny mariazy an'elakelatrano sy kelikely iray. Na dia lanonana fahita mahazatra aza ny mariazy ao Tadjikistan, tsy tahaka izany kosa ity lanonana ity noho ny antony iray lehibe: samy lehilahy ireo mpanambady vao. Tanora roa, samy eo antenatenan'ny faharoapolo sy fahatelopolo taonany no nanatontosa lanonana nanambarany fa mikasa hiaina toy ny olon-droa mifankatia izy ireo, na dia eo aza ny tsy fandeferana amin'ireo pelaka vitsy an'isa ao Tadjikistan sy ny tsy fisian'ny lalàna mandrakitra ny mariazy eo amin'ny olon-droa mitovy taovam-pananahana.
Tao amin'ny Twitter, nankalaza [ru] ny lanonana ny @gaytajikistan
Fandresena kely ho antsika: Mariazina pelaka eto Tadjikistan.
Somary tsy faly kosa ny sasany tamin'ireo mpiseran'ny media sosialy. Tao amin'ny Blogiston, naneho hevitra [ru] tamim-pahatezerana manoloana izany vaovao izany i Sarbaland, manonona ireo pelaka ho «sodomita» ary miampanga ny Tandrefana ho “mandrisika” ny fahapelahana ao amin'ny firenena:
Tsy mba nieritreritra aho fa indray andro any hahita sodomita mikakaraka mariazy eto amin'ny firenentsika ary milaza momba izany amin'ny olon-kafa. Diso aho. Angamba voasariky ny Tandrefana sy ny politikany amin'ny fandrisihana izao karazana hadalana rehetra izao ihany koa isika Tadjikana.
Nanohy [ru] nilaza izy fa tsy anisan'ny fiarahamonina Tajik ireo mpikambana ao amin'ny LGBT ary tokony hahilika:
Rikoriko aho mamaky ity. Tsy mazava amiko mihitsy ny antony mahatonga ireo sodomita ireto mitondra tena tahaka izao ary manatontosa mariazy ato amin'ny fiarahamonintsika Miozolomana. Tsy azoko ny antony mahatonga ireo ray aman-dreniny sy ny fianakaviany tsy manakana azy ireo. Raha manoratra vaovao momba izany ireo mpanoratra gazety, maro ny olona mahafantatra izany.
Miaro ny sodomita ny fikambanana, ny masoivoho sy ny mpanoratra gazety Tandrefana. Maro amin'ireo mpiray tanindrazana amintsika ihany koa ankehitriny no voasarika ary miaro ireo tsy olombelona ireo. Mihevitra aho fa tokony hilaza amin'ireo firenena Tandrefana ireo isika hoe: raha mila ireo karazan'olona (pelaka) ireo ry zareo ary te-hiaro azy ireo, dia tokony hoentiny manaraka azy any. Aoka ny governemanta mba hanampy ireo olona ireo hiala eto Tadjikistan mandrakizay, tsy misy toerana ho azy ireo ato amin'ny fiaharamonitsika. Tsy anisan'i Tadjikistana izy ireo!
Hoy ilay mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Iskandar nanoratra tamin'ny volana Febroary:
Nosoritana ho “afoben'ny pelaka” i Tadjikistan, firenena Azia Afovoany mpandala ny nentin-drazana izay miozolomana avokoa ny mponina maherin'ny 95 isanjato. Miha-mitombo ny media sosialy mankasitraka ny fikambanana LGTB eto amin'ny firenena ary manohitra ny fihetsika fankahalana pelaka.
Tsy mankasitraka avokoa ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra tamin'ny fitantarana nataon'ny Radio Ozodi mikasika ny firariantsoa, izay milaza betsaka momba ny LGBT sy ny “propagandy tandrefana”, na dia izany aza, nisy ny olona iray nandefa firarian-tsoa [ru]:
Arahabaina ianareo noho ny fahavitan'ny mariazinareo!!! Mirary anareo ny tsara indrindra!! Izay no anjaran'izy ireo, ny fiainan'izy ireo, manan-jò hiaina araka izay tiany ny olona rehetra! C'est la vie (Izay ny fiainana)!
Nanampy tamin'ny fanatontosana ity lahatsoratra ity i Alexander Sodiqov